Yakha iTyala lakho leShishini ngeZiko-lesazisi seShishini
Ukuthenga ngetyala kwishishini kufuna iNombolo ye-EIN. Kanye iprofayile yakho yobuqu isekwe kwinombolo yoKhuseleko lweNtlalo njengokuchongwa kwakho, ishishini lakho 'lokuthenga ngetyala liya kuba lisuselwa kwi-ID yakho yeRhafu, okanye kwi-EIN (Inombolo yeSazisi yoMqeshi ye-Federal) oyinikezwe yi-IRS. Ukuba awunayo inombolo ye-EIN kwishishini lakho olwakha ityala, kuya kufuneka ufumane enye. Iinkampani ezihlanganisiweyo zinokuba ne-EIN yakho namhlanje, tsalela umnxeba i-1-800-Inkampani ukuze ufumane iinkcukacha. Ukuba utshintshe igama lenkampani yakho okanye wenze ishishini lakho nje, kufuneka ufumane inombolo entsha ye-EIN kwi-IRS.
Unokhetho oluninzi apha, kuqala ungagqiba le Ifom ye-IRS ye-SS-4 kwaye uyithumele kwi-IRS ukuze isebenze. Okanye unako faka isicelo kwi-IRS kwi-intanethi. Ukuba une-EIN kwaye ulibeka kwindawo engeyiyo inombolo yakho, unganako Nxibelelana ne-IRS ukusombulula loo meko. Kuya kufuneka hlaziya idilesi yakho okanye ulwazi kunye ne-IRS ukuze uqinisekise yonke ingcaciso yakho ichanekile ngaphambi kokuba uqale ngokwakha ityala lekhampani.
Unokufuna ukujonga kwakhona izikhokelo ze-IRS ukufumanisa ukuba ngaba Funa i-EIN entsha ngaphambi kokuba uqhubeke.
Qinisekisa ulwazi lweQumrhu loShishino olwakha ityala
Ishishini lakho lineprofayili kunye neearhente ezininzi, ezibandakanya, ilizwe ofakwe kulo, i-IRS, ibhanki yakho kunye nayiphi na incwadi yolawulo okanye iirekhodi zoncedo ze411. Kuya kufuneka ukuba uqinisekise ukuba zonke ezi zinto zihambelana nolwazi lwangoku noluchanekileyo. Khumbula ukuba idilesi yombutho wakho osemthethweni, ayinakuba yibhokisi ye-PO kunye nenombolo yomnxeba yeshishini engeyiyo eyakho okanye eyomzi wakho, ke ukuba ugqibile amanyathelo okulungiselela ngaphambi koku, kufuneka uqinisekise ukuba yonke ingcaciso ye-arhente ihlaziyiwe kwaye iya kuhambelana nolwazi lwakho Ngenisa xa usakha iprofayili yeshishini lakho.
Umdlalo oqinisekileyo uyafuneka
Olu lwazi kufuneka luhambelane ngqo nazo zonke iirekhodi zeshishini lakho kunye noluhlu lwearhente. Ukuba igama lakho lishishini ngu "Ukulungiswa kweABC, Inc" kwaye ufumana ulwazi oludweliswe "njengeNkampani yoLungiso lweABC" okanye "iingcaphephe zoCingo lweABC", kufuneka itshintshwe. Omnye umzekelo wedilesi yakho, ukuba iqulethe iyunithi okanye inombolo yokutshatisa, ezo kufuneka zifane, okt "Suite 700", "#700", "unit 700" ayifani ngeenjongo zokwenza iprofayili yakho yamatyala kwishishini.
Iingxelo ezinikezela nabanikezeli beenkonzo zakho kufuneka zitshekishwe ukuqinisekisa ukuba banalo igama kunye nedilesi echanekileyo. Oku kubandakanya iintlawulo zakho zenkonzo, amandla, i-Intanethi, umnxeba, unikezo, njl. Kubalulekile ukuba ezi nkcukacha ziqwalaselwe kwaye zilungiswe ukuba azichanekanga.
Unobhala welizwe / weKhomishini yeQumrhu -Iofisi kaRhulumente oyibandakanyayo inolwazi lwakho lweshishini lwangoku. Le yinto efanayo yokufaka ingxelo yonyaka okanye ingxelo yenkcazo eqhubeka kwirekhodi yoluntu. Jonga kwaye uqinisekise ukuba amaxwebhu akho okufaka kunye nerekhodi loluntu okwangoku.
Ulwazi lwe-IRS -Ungaqhagamshelana ne-IRS kwaye uqiniseke ukuba ulwazi lwakho lweshishini lichanekile. Ukuba unayo inkampani yeCPA elawula iirekhodi zakho, baya kuba nakho ukuhlaziya ulwazi lwakho. Ukuba ufuna ukuhlaziya idilesi yakho nge-IRS, ungasebenzisa Ifom ye-IRS 8832 ukwenza njalo.
Ejongene nezokuxhumana -Ungakhawuleza Hlaziya idilesi yakho kunye ne-USPO besebenzisa isikhokelo sabo se-mover kwi-intanethi.
Ezinye iiarhente -Umhlala-phantsi, iVeterans kunye neOfisi yoLawulo lwaBasebenzi (OPM) idilesi yokutshintsha ingafumaneka kwiphepha lewebhusayithi yoKhuseleko lweeNtloko.
Isikhombisi kunye noncedo lwe411 -Ukuba ishishini lakho lidweliswe kulo naluphi na ulawulo okanye isixhobo soncedo se411, kuya kufuneka uqinisekise ukuba iqulethe ulwazi lwakho lomthetho oluhlaziyiweyo olusebenzayo ukudala ityala lekhampani.
Inkqubo yokwakhiwa kwekhredithi yeshishini iya kuhamba kakuhle nolwazi lwakho luphicothiwe, luhlaziywa kwaye lwangoku. Ngamaqela amaninzi ahluka-hlukeneyo anokujonga xa kusungulwa ikhredithi yobumbano, isigaba sokulungiselela kufuneka siqiniseke.
>> Qhubeka kwiNyathelo elilandelayo kulwakhiwo lweCorporate Corp - Dun naseBradstreet >>
Iiarhente zokunika ingxelo ngetyala kwiShishini
Iingcebiso ngeShishini letyala
Umngcipheko weShishini oMkhulu kuMngcipheko-uyintoni kwaye ungayiphepha njani
Ukubaluleka kokuThotyelwa kweKhredithi kwiShishini
Sebenzisa amanqaku oLuntu etyala ukwakha iTyala leShishini
Loluphi uhambiso lwetyala kwiShishini olusebenzisa kuwe?
Ibali letyala leShishini